8Yar (အိပ်ယာ): ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag)
Posted by 8Yar at 11:09 pm
လုံးလုံးနဲ့ ၀၀ကို မနာလိုဘူး.. ခရီးသွားမယ်ပေါ့.. အစောထဲကတော့ သိပါတယ်.. နီးလာတော့ ပိုမနာလိုဘူး.. အဲ့လက်မှတ်ကို သေချာသိမ်း.. လာခိုးမှာ ဟဟဟ
သူအဆင်ပြေနေတော့အသံက စာစာနဲ့ ဟိုတလောကပုံနဲ့ တခြားစီ :P
24 December 2011 at 00:14
ကြောက်လို့လိုက်ပြောတာနော် မယုံနဲ့ မြန်မြန်သာလက်ထပ်လိုက်
24 December 2011 at 00:51
တွေ့ကြရင် ကောင်းမလား..မတွေ့ကြရင် ကောင်းမလား.. :D
ဟုတ် ရေးဆိုလည်းရေးပါ့မယ် ရက်ကတော့ကပ်နေပီမလို ခုညနေပရြေးတင်လိုက်ပါ့မယ်
အစ်ကို ရေ သတိတရ နဲ. တဂ်ပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်တာ နဲ. ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။
25 December 2011 at 03:23
25 December 2011 at 04:19
တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားတယ် မောင်8Yar ရေ။
ရေးနိုင်ဝူးဆို ၊ ရေးနိုင်ဝူး ၊ ဒါဗြဲ ၊
ညီ့အတွက် ပျော်စရာတွေ အများကြီးပဲး) ၀မ်းသာတယ် ညီရေ ပျော်စရာတွေ အမြဲကြူံပါစေဗျာ ။
တဂ်စ်ပို့စ်က ရေးတော့ရေးမယ်လေ အစ်ကိုက ပိတ်ရက်မရသေးတော့ ဘာလုပ်မယ် ဘာအစီစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာ မသိသေးလို့ နောက်နှစ်စောင့်နော့်း)))
ပျော်ရွှစ်ဖွင့် ခရစ်စမတ်နဲ့အတူ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါဗျာ
အွန် သူက အဲလိုကိုး )
ကဲ ကဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်များဖြစ်ပါစေ အိပ်ယာကလေးရေး)
၈ယာရေ .... တဂ်ပို့စ်လေးလာဖတ်သွားပါတယ်နော်..
ပျှော်ရွင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်လေးတွေ ဖြစ်ပါစေ...မမဒိုးကန်လိုပဲ
ပြောလိုက်တယ်နော်.... ချိုမြိန်တဲ့ ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်နဲ့ ပျှော်စရာ
ကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို အတူတူ ကြိုနေမယ်နော်..... ဟက်ပီးနယူးရီးယား
ခင်မင်တဲ့ ပူးပူး :)
ပိတ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ...း)
Blog DJ said...
hal hal...Zhong Yi ko thwar pyaw mal...thu mingalar saung ma lar pal ID ko thwar tel loe...
28 December 2011 at 15:31
28 December 2011 at 17:33
ကို8yar နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ တက်ဂ် ကရေးပြီးသွားပြီ။
ဒီဇင်ဘာတဂ်ပို့စ်ကို အမှီလာဖတ်တယ်ညီရေ.. ခဏနေရင် ဒီဇင်ဘာက ကုန်တော့မယ်.. အိပ်စမ်းဆိုတာနဲ့ စွတ်အိပ်နေတာ ခုမှပဲ လာလည်ဖြစ်တော့တယ်..:P
1 January 2012 at 02:49
8yarရေ...။ သတိတရ tagတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ http://www.myathwayni.com/?p=3763 မှာ Tag Post ၂ခုကို ပေါင်းေ၇းပေးထားပါတယ်။
2 January 2012 at 17:36